Manao Printy ny Angona Akanjo 3D Voalohany Indrindra Eran-tany ny Tanora Israelianina Iray Mpamorona Lamaody · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 31 Oktobra 2018 18:19 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Français, Català, 日本語, English
(Fanamarihana: lahatsoratra Anglisy nivoaka tamin'ny Aogositra 2015 ity lahatsoratra ity)
Zipo, ambonin'akanjo, ary kiraro natao printy 3D avy amin'ny angona akanjon'ilay mpamorona lamaody Israeliana, Danit Peleg. (Loharano: DanitPeleg.com)
Manome fotodresaka horesahan'izao tontolo izao ilay mpamorona lamaody sady mpivoy hevi-baovao, Danit Peleg, 27 taona. Manazava i Peleg, mpamorona ny angona akanjo voalohany indrindra eran-tany natao printy 3D fa:
Ny tanjoko dia ny hamorona akanjo vonona hotafiana avy ato an-trano amin'ny alàlan'ny fampiasàna ireo fanaovana printy azon'ny rehetra jifaina. Nandany ny taon-dasa teo nikarohana ny vahaolana tsara indrindra aho.
Eritrereto fotsiny anie ny azo atao amin'izany e… raha mangatsiaka ianao, ataovy printy ny palitao. Hitsangatsangana tsy misy entana? Ataovy printy ao amin'ny efitry ny tranobe fandraisam-bahiny ny akanjonao. Azontsika atao ve ny hamorona, hizara ary hanao printy mivantana avy ao an-trano ny akanjontsika atsy ho atsy?
Nahazo mpijery 2,8 tapitrisa ary nisy nizara in-50.000 hatreto ny lahatsary fampiroboroboana maharitra roa minitra nataon'i Peleg mampiseho ny làlana sy ny dingana noraisiny, navoakany tao amin'ny YouTube ny 22 Jolay 2015 ary tao amin'ny pejy Facebook-n'ny Start-Up Nation ny 29 Jolay.
Vita avy aminà kofehy plastika antsoina hoe Filaflex ilay angona akanjo ary natao printy tamin'ny Witbox. Natao tamin'ny alalan'ny andianà akora misosona sy mifampitohy ny fanaovana printy 3D, mba hampifanaingina ireo sosona tsirairay mifanarakaraka. Mitatitra i Fashionista fa maharitra 400 ora ny fanaovana printy ny akanjo iray nataon'i Peleg; maharitra kokoa ny fanaovana printy ny kiraro.
Koa satria mivoatra sy mihakinga ary mihamora hatrany ny teknôlôjia fanaovana printy 3D, afaka misintona sy manao printy failo any an-trano tahaka ny ataony amin'ireo maodelin'akanjo 2D ireo mpampiasa. Manombatombana i Peleg:
Heveriko fa vao fanombohana fotsiny ity. Koa satria mandroso ny teknôlôjia, hanao printy ny akanjontsika any an-trano isika rehetra.